DEG DEG: DF Somalia oo diiday dalabka Kenya ee dib u dhigista dacwada badda (Jawaab lama filaan oo la siiyay Kenya)! | HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Jamhuuriyadda Federaaka ah ee Soomaaliya ayaa ku gacan seertay codsiga Kenya ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ uga dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Kenya, Paul Kihara ayaa warqad rasmi ah oo uu u diray waxa uu codsiga Kenya cudur daar uga dhigo in Kenya ay dooneyso inay qorato koox cusub oo ah qareeno difaaca, sidaas darteedna ay u baahan tahay waqti dheeri ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa diiday codsiga Kenya, waxaana la filayaa in berri ay warqad rasmi u dirto maxkamadda ICJ, kuna wargeliso go’aankeeda, iyo inay diyaar u tahay in kiiska uu sii socdo.
Waxayna Soomaaliya ku doodi doontaa, in haddii Kenya ay dooneyso inay qareeno cusub qoroto ay haystay in ka badan hal sanno, oo ay sidaas ku sameyso, sidaas darteedna cudur-daarkaas aan iminka la aqbali karin.
Dhageysiga dacwadda ayaa waxaa la qorsheeyey in u dhaco maalmaha Isniinta illaa jimcaha ee 9-ka illaa 13-ka bishan September.
Si kastaba, go’aanka kasta oo dib loogu dhigayo kiiska ama lagu joojinayo waa inay isku racaan labada dhinac ay maxkamadda ay quseyso, haddii ay sidaas dhici weyso, oo hal dhinac kaliya uu dalbado sida ay sameysay Kenya, waxa ago’aan ka gaari doono maxkamadda ICJ.
hakinta dacwada badda
ka hor timid
oo u jawaabtay Kenya